साउदीबाट एक नेपालीको गुहार– कम्पनीले निकाल्यो, सडकमा अलपत्र छु ! «
साउदीबाट एक नेपालीको गुहार– कम्पनीले निकाल्यो, सडकमा अलपत्र छु !
Published : 16 April, 2020 7:22 pm
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबमा रहेका एक युवाले आफू सडकमा अलपत्र परेको भन्दै उद्धारका लागि अपिल गरेका छन् । लकडाउनको समयमा कम्पनीका म्यानेजरले आफूलाई कुटपिट गर्दै बाहिर निकालिदिएको उनले बताए । अनलाइनखबरसँग फोन सम्पर्कमा गोविन्‍द नेपालीले आफ्नो पीडा यसरी सुनाए :
म साउदी अरबको अल्कासिम बराइदास्थित तस्लिया भन्ने स्थानमा रहेको निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्दै आएको थिएँ । छ महिना अगाडि मलाई कम्पनीको म्यानेजरले चोरीको झूटो आरोपमा फसायो । उसले अदालतमा केस गर्‍यो । अदालतमा मैले आरोप स्वीकार गरिनँ । तर, पनि मलाई चार महिना जेल हालियो । जेलबाट निस्केपछि म घर फर्किने मनस्थितिमा थिएँ । त्यतिबेला यसरी नेपालमा लकडाउन होला भन्ने थाहा थिएन । इदको छुट्टीमा नेपाल फर्किने योजना थियो ।